NgoMgqibelo, Julayi 20, 2019
Qala ngokubanzi Imikhomo
Imikhomo okanye iimbumba ze-minke ziyimbewu yokufa kwiiplanethi. Akunjalo kuba uluntu luye lwayeka, kodwa ngenxa yemali engapheliyo yenkunkuma yeplastiki ejikeleza elwandle.
Masifumane ezi ziqhwaba ezithandekayo.
Imikhomo ifunyenwe kumntla wehlabathi jikelele. Bahlala kufuphi nxweme. Ngokwenza njalo, sifumana iirekhodi esiyathanda ukuzithumela kubafundi bethu.
KwiHindu Kush Akukho nto entsha, i-Cover, i-kasaan media publishers, i-2016
I-Minke Whale i-Faxaflio 139, i-dram / mcvth, i-media kasaan, i-2018
Yithenge ngoku kuphela: EUR 179,00
Yithenge ngoku kuphela: EUR 27,00
Angebotsende: Mittwoch Jul-31-2019 5:05:50 CEST
Yithenge ngoku kuphela: EUR 75,00
EUR 60,00 (I-0 bids)
Iimbono ezilungileyo ezivela eJamani - eziphazamisayo
Uphahlaze i-UFO kwiMercury?
Inqaku langaphambiliIphiko lamazwi amalungileyo aseJamani - okuphazamisayo
EUR 2.010,00 (I-40 bids)
EUR 965,00 (I-20 bids)